I-AIRBNB ithetha ngesigqibo seNkundla ePhakamileyo malunga nokuvalwa kokuhamba e-US
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Amalungelo abantu » I-AIRBNB ithetha ngesigqibo seNkundla ePhakamileyo malunga nokuvalwa kokuhamba e-US
Airlines • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • Iindaba zaseIran eziQhekezayo • Iindaba zaseLibya eziQhekezayo • iindaba • Iindaba zaseNyakatho Korea • abantu • Iindaba zaseSomalia eziQhekezayo • Iindaba zaseSyria eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseVenezuela zokuPhula
Namhlanje, iNkundla ePhakamileyo yase-US ithathe isigqibo sokuxhasa ukuthintelwa kokuhamba okuyilelwe ngolawulo lukaTrump. Ukuvinjelwa kuthintela abantu abavela eIran, eLibya, eSomalia, eSyria, eVenezuela, kwanakweli “qabane litsha” eMelika, ukuba bangene eMelika.
Olu luguqulelo lwesithathu lokuvalwa kokuhamba okoko yaqalayo nasemva kokuqhuba kwiinkundla ezahlukeneyo. Ekuqaleni, abagxeki babiza iinguqulelo zangaphambili ngokungahambelani namaSilamsi, nangona kunjalo, ngoku kuya kufuneka baphinde baqwalasele ileyibhile ngoku yokuba ukuvalwa kukwabandakanya iVenezuela neNorth Korea. Amazwe anamagama akuluhlu kuba abaphathi bakaTrump bathi bangaboyikiso okanye abasebenzisani ne-US.
Abaseki be-Airbnb, uBrian Chesky, uJoe Gebbia, kunye noNathan Blecharczyk, banako oku malunga nolona hlobo lwakutshanje lokuvalwa kunye nesigqibo seNkundla ePhakamileyo sokukuxhasa:
Siphoxekile sisigqibo seNkundla. Ukuthintelwa kohambo ngumgaqo-nkqubo ochasene nomsebenzi wethu kunye neenqobo-ukuthintela uhambo olusekwe kubuzwe bomntu okanye inkolo ayilunganga.
Kwaye ngelixa iindaba zanamhlanje zibuyela umva, siza kuqhubeka nomlo nemibutho enceda abo bachaphazelekayo. I-Airbnb izakuthelekisa iminikelo kwi-International Refugee Assistance Project (IRAP) ukuya kuthi ga kwi-150,000 yeedola ukuya nge-30 kaSeptemba 2018 ukuxhasa umsebenzi wabo wokuxhasa utshintsho lwenkqubo kunye neendlela zomthetho kwabo bachaphazelweyo kukuhamba. Ukuba ungathanda ukujoyina, unga nikela apha.
Siyakholelwa ekubeni uhambo ngamava aneenguqu kwaye anamandla kwaye ukwakha iibhlorho phakathi kweenkcubeko kunye noluntu kudala ilizwe elinobuchule, lokusebenzisana kunye nelikhuthazayo. Kwa-Airbnb, sinombulelo kuluntu lwethu oluza kuqhubeka luvula iminyango kwihlabathi liphela ukuze sihambe kunye.